Itobiya oo sheegtay inay Hal Gooba ku xasuuqday shabaabkii ugu badnaa. | ogaden24
Itobiya oo sheegtay inay Hal Gooba ku xasuuqday shabaabkii ugu badnaa.
Dawlada Itobiya ayaa tan iyo intii uu xilka lawareegay Abiy Ahmed waxay markii ugu Horaysay shaacisay inay ciidamadeedu xasuuqeen shabaabkii ugu badnaa.
Warbaahinta Afka dawlada kuhadasha ee Fana oo soo xignaysa Taliyaha ciidamada Cirka General Yilma Merdassa ayaa sheegtay in duqaymo Qorshaysan oo ciidanka cirku Gudaha Somaaliya ka fuliyay lagu xasuuqay in kabadan 70-maleeshiyada kooxda Shabaab ah.
Taliye Yilma waxaa uu sheegay in Hawlgalka oo ah mid Qorshaysan lagaga Hortagay weerar kooxda shabaab doonaysay inay kuqaadaan cutub katirsan ciidanka Itobiya oo kusugan Gudaha Somaaliya Qaybna ka ah Hawlgalka Amisom.
Generalku masheegin Goobta ay kuxasuuqeen maleeshiyada shabab iyo Goorta weerarku dhacay toona waxaa se uu ku Faanay inay Duqayntaasi kagaadheen Guul Taariikhi ah ayna dhabarka kaga Jabiyeen kooxda Shabaab sida uu hadalka u dhigay